Lenovo K3 Note, Octa Core 64-bit နှင့်2Gb RAM တစ်ခုလုံးသည် ၁၃၅ ယူရိုသာရှိသည်
ယနေ့တွင် Lenovo K3 Note၊ 64-bit Octa Core တစ်ခု၊ RAM2Gb နှင့် IPS FullHD မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကို ၁၃၅ ယူရိုဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်အောင်သင်လေ့လာသည်။
Nokia သည်ထုတ်လုပ်မှု၊ ပံ့ပိုးမှု၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဖြန့်ချိရေးလမ်းကြောင်းများကိုပြန်လည်ရောက်ရှိရန်ထုတ်လုပ်သူကိုရှာဖွေသည်။
Galaxy Note5၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်ထားသည် - 4GB RAM,5MP OIS ရှေ့ကင်မရာ ...
Galaxy Note5ကိုသြဂုတ်လလယ်တွင်နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာမည့်သတင်းများအရသိရှိရလိမ့်မည်။ "All-In-One" SoC စနစ်နှင့်ပါ ၀ င်မည့်ဖုန်းတစ်လုံး။
OnePlus သည် OnePlus Two Mini ကိုစတင်နိုင်သည်
အသစ်ထွက်ရှိလာသည့် OnePlus Two ထုတ်ကုန်မတိုင်မီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းကောလာဟလအသစ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည် ဒီကောလာဟလတွေအရ OnePlus Two Mini ဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာလိမ့်မယ်။
Motorola Moto G 2015 ကိုဘာသာပြန်အသစ်များတွင်တွေ့ရသည်
နောက်မျိုးဆက် Moto G ၏အလှည့်အပြောင်း ၂၀၁၅ Moto G သည်ပြန်ဆိုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
LG G4s သည် LG ၏ G4 မိသားစုအသစ်ဖြစ်သည်
LG သည် LG G4s ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး LG G3s ၏နောက်ဆက်တွဲနှင့်ညီငယ်ဖြစ်သော LG G4 ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့က၎င်း၏အဓိကဝိသေသလက္ခဏာများကိုတင်ပြ။
Samsung Galaxy Note5၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုကိုAugustဂုတ်လအလယ်တွင်တင်ခဲ့သည်
ယခုနှစ် Samsung Galaxy Note5၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုကို2015ဂုတ်လလယ်ပိုင်းတွင်လက်တွေ့ကျကျအတည်ပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Huawei ၏ Nexus သည်နို့စို့အရွယ်ဖြစ်သည်
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ Nexus ထုတ်ကုန်နှစ်ခုကို LG ကထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ တစ်ခုက Huawei ကထုတ်လုပ်တယ်။ Huawei ၏ Nexus သည်နို့စို့အရွယ်ဖြစ်သည်။
Xiaomi ကဇူလိုင် ၁၆ ရက်တွင် Xiaomi Mi16 ၏သတင်းစာကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ Xiaomi သည်လာမည့်ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်တွင်လုပ်ငန်းကဏ္ the ၏သတင်းစာကိုဆင့်ခေါ်သည်။ နောက်တစ်နေ့ Xiaomi Mi16 ကိုငါတို့တွေ့မှာလား။
ဤရွေ့ကားလာမည့် Samsung Galaxy A8 ၏ပြန်ဆိုဖြစ်ကြသည်
Galaxy မိသားစုဝင်အသစ်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာတော့မည့် Samsung Galaxy A8 ဖြစ်သည်။ Phablet သည် ၅.၉ မီလီမီတာသာရှိသည်။
Wi-Fi မပါပဲ Chromecast ကိုသုံးရန် Google က Ethernet adapter ကိုဆွဲတင်သည်
Google သည် Chromecast တွင် WiFi အသုံးပြုခြင်းကိုတားဆီးသည့်တရားဝင် adapter ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Router နှင့် Chromecast စက်သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သည်။
Samsung Galaxy S6 ကို Pepsi မှာနှစ်လိုက်ရင်ကော။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဗွီဒီယိုပေါ်တွင်ပြသ
Samsung Galaxy S6 ဟာရေစိုခံတယ်လို့ထင်ပါသလား။ အကယ်လို့ Samsung Galaxy S6 ကို Pepsi မှာနှစ်မြှုပ်လိုက်ရင်ကော။ ဗီဒီယိုမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာမင်းတို့ပြမယ်။
OnePlus သည် OnePlus Two ဗားရှင်းသုံးမျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်
OnePlus သည်မတူညီသောမူကွဲသုံးမျိုးကိုမိတ်ဆက်ရန်စီစဉ်နေနိုင်သည်။ သူတို့ကိုအကြားခြားနားချက်? RAM မှတ်ဉာဏ်
Xiaomi Mi5 ကတော့ယူရို ၃၅၀ အောက်ကျသင့်မှာပါ
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့် Xiaomi Mi5 ၏စျေးနှုန်းကိုစစ်ထုတ်သည်။ မကြာမီတင်ပြတော့မည့်အာရှထုတ်လုပ်သူ၏နောက်ထပ်အထင်ကရဖြစ်သည်။
လာမည့် Samsung Galaxy Note5နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိထားပြီးဖြစ်သည်
လာမယ့် Samsung Galaxy Note5နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားလာပါပြီ။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့သူကသူ့ရဲ့အပြင်ပန်းအသွင်အပြင်နှင့်အခြားအရာတစ်ခုကိုသင်ပြောပြလိမ့်မည်။
Sony သည် Xperia Z5 အသစ်ကိုစက်တင်ဘာလတွင်ဖြန့်ချီနိုင်မည်ဖြစ်သည်
Sony သည် Xperia Z5 ထုတ်ကုန်သစ်ကိုစက်တင်ဘာလတွင်ဖြန့်ချိမည်
Olixar X2 Pro ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုစမ်းသပ်ပြီးအရည်အသွေး ၃၅.၉၉ ယူရိုသာရှိသည်
ဒီနေ့မှာတော့ ၃၆ ယူရိုထက်နည်းသော Bluetooth 4.0 နည်းပညာနှင့် NFC ပါသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နားကြပ်အချို့ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်အားအကြံပြုလိုပါသည်။ သင်၏အမည်နှင့်မော်ဒယ် Olixar X36 Pro ကိုကျွန်ုပ်တို့ MobileFun.es မှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည်
မကြာခင်မှာပဲ Casio Smartwatch ကိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
Casio ဥက္ကKaz္ဌ Kazihuro Kashio အရလာမည့် ၂၀၁၆ တွင်ပထမဆုံး Casio Smartwatch၊ ပထမဆုံး Casio စမတ်နာရီရှိလိမ့်မည်။
Nexus52015 ကိုအတည်ပြု; LG ကလုပ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်
LG ကအမည်မဖော်လိုသူ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး က ၂၀၁၅ Nexus5သစ်ကိုထုတ်လုပ်သူအားရောင်းချရန်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။
Samsung Terminal များရှိဘက်ထရီများတွင်လျှို့ဝှက်မိုက်ကရိုဖုန်းရှိသည်။ မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် NFC ချစ်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
လိမ်လည်မှုအသစ်တစ်ခုအရ Samsung ဘက်ထရီများတွင်လျှို့ဝှက်မိုက်ကရိုဖုန်းတစ်ခုပါရှိသည်။ အမှန်တရားနှင့်မည်သည့်အရာမျှ ထပ်မံ၍ မဖြစ်နိုင်ပါ။ သူတို့ကတကယ်တော့ NFC ချစ်ပ်ကိုပေါင်းစပ်လိုက်တယ်။
၂၀၁၅ ပထမနှစ်ဝက်တွင် Xiaomi သည်စမတ်ဖုန်း ၃၄.၇ သန်းရောင်းချခဲ့သည်
Xiaomi သည်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းစမတ်ဖုန်းရောင်းချရမှုမှာ ၃၄.၇ သန်းရှိသည့်မယုံကြည်နိုင်လောက်သောနံပါတ်များရှိသည်။ အတော်လေးအရှုပ်တော်ပုံပုံ။
Xiaomi Mi5, Snapdragon 820 နှင့်4GB RAM?
Xiaomi Mi5 သည်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးယိုစိမ့်မှုအသစ်သည် terminal ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်။
Samsung Galaxy S4 ရဲ့ဘက်ထရီပြproblemsနာတွေနည်းနည်းလေးနည်းနည်းညှစ်ထုတ်လိုက်ရအောင်
ဤဆောင်းပါး၌ Samsung Galaxy S4 ၏ဘက်ထရီပြproblemsနာများနှင့်အကောင်းဆုံးဝယ်ယူမှုအတွက်သင့်အတွက်အဖြေအချို့ပေးပါမည်။
စစ်ထုတ်ထားသောတရားဝင်အရာရှိအသစ် Moto G 2015 ၏ရုပ်ပုံများကိုထုတ်ပေးသည်
Motorola Moto G 2015 အသစ်၏ rendering images များသည်အလယ်အလတ်တန်းဆက်အတိုင်းဆက်လက်တည်ရှိရန် ရည်ရွယ်၍ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
Oneplus2တွင်လက်ဗွေဆင်ဆာစနစ်ပါရှိသည်
ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင်တင်ဆက်မည့် OnePlus2သစ်သည်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုနှင့်ပေါင်းစပ်သွားမည်ဟုထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်။
၎င်းသည် OnePlus2၏ပထမဆုံးပုံရိပ်ဖြစ်နိုင်သည်
OnePlus2လို့ယူဆရတဲ့အရာတစ်ခုပုံတစ်ပုံထွက်လာတယ်။
၎င်းသည် Huawei MediaPad M2 ဖြစ်သည်
စမတ်တက်ဘလက်အသစ်တစ်မျိုး Huawei ၏ထုတ်ကုန်ကတ်တလောက်နှင့်ဆက်သွယ်သည်။ Huawei MediaPad M2 ဖြစ်ပြီးကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့် ၈ လက်မတက်ဘလက်ဖြစ်သည်။
Sony Xperia Z3 Plus ကိုဥရောပတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ
Sony Xperia Z3 Plus ကိုဥရောပတွင်ဝယ်ယူပြီးယူရို ၇၀၀ ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။
ဒါက Lenovo Vibe S1 ပါ
TENAA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကြောင့်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ Lenovo မှ terminal အသစ်တစ်လုံးပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Lenovo Vibe S1 ဖြစ်သည်။
တရားဝင် Android ဗားရှင်းများအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ထင်ရှားသော Android ဗားရှင်းတစ်ခုချင်းစီ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်အသွင်အပြင်အကျဉ်းချုပ်။ beta မှ Android M. သို့
3D ပရင်တာများ သုံး၍ ဂီတတူရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း
Type C USB သည် OnePlus2New universal standard ၏ connector ဖြစ်မည်လား။
USB Type C connector ကိုနည်းပညာအသစ်တွင်စံအဖြစ်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အခုတော့ OnePlus2ကလက်ခံပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ခြေလှမ်းအောက်ပါကျန်ထုတ်လုပ်သူများမြင်လိမ့်မည်နည်း
Xiaomi Mi 4i ကိုနိုင်ငံတကာတွင်ဒေါ်လာ ၂၃၈ ဖြင့်ရောင်းချနိုင်သည်
Xiaomi Mi4i ကိုနိုင်ငံတကာဈေးနှုန်းဖြင့်ဒေါ်လာ ၂၃၈ ဖြင့်ရောင်းချပေးသည်။ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီးဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဖော်ပြသည်။
Sony က Xperia Devices ၁၇ ခုအတွက် Android M Developer Preview ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Sony သည်သူ၏ပွင့်လင်းသောမူဝါဒကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သို့မှသာ developer များက Xperia 17 ပစ္စည်းများအတွက် Android M preview ကိုရယူနိုင်သည်။
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးစမတ်နာရီဖြစ်တဲ့ Cubot R8 ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။
Android Wear တွင်နာရီမျက်နှာအသစ်များရှိသည်
ဂူးဂဲလ်က Android Wear အတွက်နာရီမျက်နှာအသစ် ၁၇ ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး Google Play မှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
Moto G 2015 ဟာဒီလိုမျိုးဖြစ်မလား။
Motorola ၏တတိယမျိုးဆက်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Moto G 2015 ၏ပုံရိပ်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။
Doogee Valencia Y 100 Pro, Android 5.1 နှင့်အတူလာမည့်တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏ terminal အသစ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံး
Doogee Valencia Y 100 Pro ၏နည်းပညာနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများအားလုံးကိုသင်သိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့်အရာအားလုံးအားပြောပြလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤဆောင်းပါးကိုနှိပ်ပါ။
touch screen ပါသည့် Xiaomi Mi Band 2
Xiaomi ၏စမတ်လက်ကောက်ဖြစ်သော Xiaomi Mi Band2သည် touch screen ဖြင့်ရောက်ရှိလာပြီး၎င်းသည်ပထမဗားရှင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်း၏စျေးနှုန်းကိုမြင့်တက်စေလိမ့်မည်
ပထမဆုံးတရုတ်စမတ်နာရီသည်၎င်း၏ထွက်ခွာမှုကိုနှောင့်နှေးစေသည်။ Huawei ၏စမတ်နာရီကိုယခုနှစ်တတိယသုံးလပတ်မှစတင်မည်။
ZTE Nubia Z9S ကိုဇွန် ၃၀ ရက်တွင်ပြသပါမည်
နောက်ဇွန်လ ၃၀ ရက်သည်ပြက္ခဒိန်တွင်တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူအတွက်၎င်း၏နောက် terminal ဖြစ်သော ZTE Nubia Z30s ကိုပြသမည့်နေ့ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ် OnePlus 2: မူရင်း Snapdragon 810 နှင့်ဒေါ်လာ ၃၂၀ အထက်တွင်ရှိသည်
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ပေါက်ကြားမှုများ OnePlus One2နှင့်ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ၎င်းသည်မူရင်း Snapdragon 810 ကိုယူဆောင်လာပြီး၎င်း၏ဈေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၃၂၀ ထက်ပိုမိုမြင့်မားလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။
Samsung Galaxy S5 ကို Android 5.1.1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်
Sammobile မှလူများတင်ပြသောနောက်ဆုံးပေါ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Samsung Galaxy S5 တွင်လည်း Android 5.1 ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ Samsung Galaxy S6 Active ကိုမြှင့်တင်ရန် AT&T လှုပ်ရှားမှုအသစ်ဖြစ်သည်
AT&T သည် Samsung Galaxy S6 Active ကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်ပျော်စရာကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် AT&T ယောက်ျားများ၏တကယ့်ဘဝပုံရိပ်ကိုကျော်လွန်မည်လား။
Power Plug မလိုပဲသူတို့၏ Terminal များကိုရောင်းချသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုရှာလေ့ရှိသည်။ Xiaomi သည်လမ်းကြောင်းသစ်သို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ အနာဂတ်မှာလူတိုင်းအတွက်ဒီလိုဖြစ်မလား။
Sony သည်အပူလွန်ကဲမှုပြfixနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့် Xperia Z3 + အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်သည်
Sony Xperia Z3 + နှင့် Sony Xperia Z4 Tablet များတွင်အပူလွန်ကဲမှုပြfixနာများကိုဖြေရှင်းရန်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
OnePlus2သည်ဒုတိယမျိုးဆက် Snapdragon 810 ကိုထည့်သွင်းပေးမည်
OnePlus ကတရားဝင်ကြေငြာလိုက်သည်မှာလာမည့် OnePlus2သည်၎င်း၏လူသိများသော SoC ဖြစ်သော Snapdragon 810 v2.1 version ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မည်။
Razer Forge TV သည် Android စတိုးအသစ်ကို Google Store သို့ရောက်ရှိလာသည်
Razer Forge TV သည် Android TV interface သစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Google ၏ပစ္စည်းဆိုင်စတိုးဖြစ်သောဂူဂဲလ်စတိုးသို့ရောက်လာသည်။
စမတ်ဖုန်းသန်း ၆၀၀ ကျော်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည့်ဆမ်ဆောင်း၏လုံခြုံရေးပြinနာကိုသတိပြုပါ
Samsung Galaxy S600 နှင့် S6 Edge, Galaxy S6, S5 နှင့် S4 mini အပါအ ၀ င်သန်း ၆၀၀ ကျော် terminal များကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သော Samsung terminal ၏လုံခြုံရေးပြproblemနာ
Flash ရောင်းချမှုမှဒေါ်လာ ၅၀ ဖြင့် Ulefone Be Touch2ကိုရယူပါ။ (ကန့်သတ်ယူနစ်)
Everbuying.net မှ Flash အရောင်းအနေဖြင့်ယနေ့တွင် Ulefone Be Touch2ကိုဒေါ်လာ ၅၀ လျှော့စျေးဖြင့်အဘယ်နည်းဖြင့်ရနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြပါသည်။
Samsung သည်၎င်း၏စမတ်ဖုန်းသစ်ဖြစ်သော Galaxy Tab E (၉.၆ လက်မ) ကို Android တွင်အနိမ့်ကျဆုံးသို့တရားဝင်ရောင်းချခဲ့သည်။
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ Xiaomi သည် Redmi စမတ်ဖုန်းများတွင်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ထည့်သွင်းရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ချစ်ပ်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Oukitel A28 ကောင်းမွန်သောလူမီနီယံစမတ်နာရီ
Oukitel A28 သည်ယခုလကုန်တွင်ရောက်ရှိလာမည့်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူထံမှပထမဆုံးစမတ်နာရီဖြစ်သည်။
Xiaomi Mi Band သည်တစ်ကမ္ဘာလုံး၌စီးရေ ၆ သန်းကျော်ရောင်းချသည်
Xiaomi Mi Band သည်ယူရို ၂၀ အတွက်အရည်အသွေးမြင့်စမတ်လက်ပတ်ဖြစ်သည့်ကမ္ဘာအနှံ့ကုမ္ပဏီ၏အကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
OnePlus 11 စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အယူအဆ
OnePlus2မရောက်ရှိသေးသော်လည်းထူးဆန်းသောဒီဇိုင်နာသည် OnePlus 11 ကဲ့သို့ပင်မိုဘိုင်းအယူအဆကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်စေသည်။
OnePlus2ပဟေandိနှင့်အချို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို
OnePlus သည်ထုတ်လုပ်သူ၏နောက်ထပ်ထင်ရှားသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည့် OnePlus2၏ပုံရိပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
လာမည့် Motorola DROID24.200mAh ဘက်ထရီ၊ Snapdragon 810 ကော?
လာမည့် Motorola DROID2၏ကောလာဟလများထွက်ပေါ်လာသည်။ ၄,၂၀၀ mAh ဘက်ထရီနှင့် Snapdragon 4.200 ပါရှိသည်။
Galaxy S6 မတိုင်မီသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်မည်သည့်ဖုန်းရှိသနည်း။ ရှာတွေ့သည်!
ဒီကနေ့မှာ Galaxy S6 ကိုဘယ်သူကဝယ်မယ်၊ ဘယ်သူဝယ်မယ်ဆိုတာကိုစစ်တမ်းနှစ်ခုပေးလိုက်တယ်။ သူတို့အရင်ကဘာ terminal လုပ်ခဲ့သလဲ။ Apple မှသူများသည်စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်ခြင်းခံရပါသလား။
Xiaomi Mi2 တွင်4Roms ကို Flash လုပ်နည်း
အောက်ပါလက်တွေ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွင် Xiaomi Mi2 တွင်4Roms flash လုပ်ရန်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တင်ပြသည်။
Xiaomi Mi4 ကို Android 5.1 Lollipop မွမ်းမံနည်း
ဒီနေ့မှာ Android4Lollipop ကိုသင်၏ Xiaomi Mi5.1.1 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုယနေ့ပြသပါမည်
အချို့သောပုံရိပ်တွေက Samsung ရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတက်ဘလက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မျက်နှာပြင်ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်းကိုပြသထားပါတယ်။
iPhone9ကိုအသုံးပြုပြီး ၂၄ ကာရက် HTC # OneM24 ၏မြှင့်တင်ရေးဓါတ်ပုံကိုရိုက်ခြင်းဖြင့် HTC သည်အတူတကွပြန်လည်စုစည်းနိုင်သည်။
တရားဝင်ထုတ်ကုန်အာမခံကိုမဆုံးရှုံးဘဲ Xiaomi Mi4 ကို Root လုပ်နည်း
ဒီနေ့မှာ Xiaomi Mi4 ကို Root လုပ်နည်း၊ CWM Recovery ကိုဘယ်လို Flash လုပ်ပြီးစပိန် Miui V6 Rom ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာယနေ့သင်ကြားပေးနေပြီ။
Xiaomi Mi4 LTE ကိုအသေးစိတ်ယူပြီးယူရို ၃၀၀ အတွက်သာရည်ရွယ်သည်
ဒီ Xiaomi Mi4 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှာကျွန်တော့်အတွက်အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော့်ကိုပြသသည်မှာကျွန်ုပ်အတွက်မည်သည့်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို Android terminal အသစ်အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး ၀ ယ်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy S6 Edge ကိုကြေငြာလိုက်သည်
Samsung က "စက္ကန့် ၆၀ အတွင်း S6" လို့ခေါ်တဲ့ Samsung galaxy S6 Edge အတွက်ကြော်ငြာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Xiaomi သည် Redmi 13 နှင့် Redmi 2A ၏စီးရေ ၁၃ သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့သည်
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ Xiaomi သည်ယခုနှစ်အတွင်းမိုဘိုင်းပစ္စည်းအများဆုံးရောင်းချသည့်ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။
Lenovo မှ ၆.၈ လက်မအရွယ် Phablet ကို TENNA မှပြသခဲ့သည်
မော်ဒယ်နံပါတ် PB1-770N နှင့်အတူဤ Lenovo phablet အသစ်သည်တရုတ်အသိအမှတ်ပြုအေဂျင်စီမှတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ၎င်း၏မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကိုထင်ရှားစေသည်။
Red Pepper 9, 5000 mAh ဘက်ထရီပါသောတရုတ်မိုဘိုင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့တရုတ်စမတ်ဖုန်းတွေရှိတယ်။ Beidou Red Pepper 9, 5000 mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့်တရုတ် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုင်ဝမ်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းဝင်စဉ်ကတည်းက HTC ၏ရှယ်ယာများသည်အနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးသို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာထိုနေ့တွင်ပင်အစုရှယ်ယာအမြောက်အများရောင်းချခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Xiaomi Redmi 2A သည်၎င်း၏စျေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ ၈၀ အထိလျှော့ချသည်
Xiaomi သည်ဈေးအသက်သာဆုံးပစ္စည်းတစ်ခု၏ဈေးကိုဒေါ်လာ ၈၀ အထိလျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည်လူသိများသော Xiaomi Redmi 80A ဖြစ်သည်။
OnePlus One ကို ၂၄၉ ယူရိုနှင့် Dropbox နှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့သည်
တရုတ် startup OnePlus Dropbox နှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်း၏ကြယ်စင် terminal သည်အစဉ်အမြဲယူရို ၂၄၉ ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
Xiaomi Mi5 နှင့် MI5 Plus တို့သည် Snapdragon 820 နှင့်အတူရောက်လာနိုင်သည်
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ Xiaomi Mi5 နှင့် Mi5 Plus တို့၏ Snapdragon 820 အသစ်နှင့်အတူဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မကြာမီတွင် Samsung store မှ Pure Lollipop ဆောင်ပုဒ်မှလာသည်
Galaxy S6 တွင်မကြာမီအချိန်တွင်အသုံးပြုသူအားဒီဇိုင်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားမှုများကိုပေးစွမ်းရန်အတွက် Android Lollipop သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုရှိနိုင်သည်။
ဒါက Samsung Galaxy J7 ပါ
နောက်ထပ် Samsung စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုအများပြည်သူသို့မတင်သွင်းမီရက်အနည်းငယ်ကပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Samsung Galaxy J7 ဖြစ်ပြီးအလယ်အလတ်တန်းစား terminal ဖြစ်သည်။
Android Wear အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သော app များ - Today Mural Watchface
Mural Watchface သည်သင်၏ Smartwatch မှပျောက်ဆုံး။ မရသင့်သော Android Wear အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
Samsung Galaxy S2 ကို Android 5.1.1 Lollipop သို့ Update လုပ်နည်း
ဒီနေ့မှာ Samsung Galaxy S2 ကို Android 5.1.1 Lolllipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော Android terminal အတွက်ဘ ၀ သစ်ကိုသင့်အားယနေ့ပြသပါမည်။
Samsung Galaxy S6 Edge Plus အသစ်ကိုစစ်ထုတ်သည်
Samsung Galaxy S6 Edge Plus အသစ်သည်ဓာတ်ပုံများပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏အစ်ကို Edge နှင့်မည်သို့ကြီးပွားမည်ကိုကြည့်နိုင်သည်။
စွဲမှတ်ဖွယ် !! Samsung Galaxy Tab7ကို Android 5.1.1 Lollipop (P1000 model) သို့မွမ်းမံနည်း။
၎င်းသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်ပုံရသော်လည်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Samsung Galaxy Tab7Android 5.1.1 ကိုမည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းသင်ပြပါမည်
ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ Sony သည် Xperia Z စီးရီးတစ်ခုလုံးအတွက် Android 5.1 ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
ဇူလိုင်လ ၁ ရက်သည် Sony, Xperia Z အကုန်လုံးအတွက် Android 1 ကို Z, Z5.1, Z1 နှင့် Z2 တို့အတွက်ဖြန့်ကျက်ရန်ရွေးချယ်လိုက်သောနေ့ဖြစ်သည်။
MediaTek ၏ Helio X10 ပရိုဆက်ဆာအသစ်နှင့်ပထမဆုံး HTC One ME
ထိုင်ဝမ်မှသူများသည်သူတို့၏ထင်ရှားသော terminal အသစ်ဖြစ်သော HTC One ME ကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်။ Helio X10 ပရိုဆက်ဆာသစ်ကိုပထမ ဦး ဆုံးတပ်ဆင်နိုင်မည့် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။
Samsung က Samsung Galaxy S6 Active ကိုမှားယွင်းစွာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
Samsung ၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်အတူ၎င်း၏ Galaxy ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် Samsung Galaxy S6 Active ကိုပြသထားသည့်ပုံရိပ်များကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်
Counterpoint Research မှဖော်ပြချက်အရယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် Samsung Galaxy S6 နှင့် S6 Edge တို့၏ရောင်းအားသည်သန်း ၅၀ အထိရှိလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Samsung galaxy S3 ကို Android 5.1.1 သို့မွမ်းမံနည်း
ယနေ့ငါ Samsung Galaxy S3 ကို Android 5.1.1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်းကို Team Resurrection Remix တီထွင်ထားသောနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းတွင်ခံစားမှုရှိသော Rom Lollipop မှသင့်အားပြသပါမည်။
ရုရှားလျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှုသည် Yotaphone မှတစ်ဆင့်သူလျှိုများ
Yotaphone မိုဘိုင်းကိုဈေးကွက်တွင်အသစ်အသစ်သောကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုအနေဖြင့်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သို့သော်ရုရှားအစိုးရ၏သူလျှိုလုပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါ။
Tag Heuer Carrera Wearable 01 သည် Apple Watch နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဇိမ်ခံနာရီ
ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်သူက Android Wear နှင့်စမတ်နာရီကိုအမည်ပေးမည်ဟု Tag Heuer Carrera Wearable 01 ကိုပြောကြားခဲ့သည်။
Samsung Galaxy Note4ကိုဇူလိုင်လအကုန်တွင် Android 5.1 ရရှိမည်ဖြစ်သည်
ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းတွင် Samsung Galaxy Note4သည် Android 5.1 Lollipop ကိုရရှိမည်ဖြစ်ရာ high-end Galaxy အဖွဲ့ဝင်များသည်မကြာမီ update ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
လက်ဗွေဖတ်သည့် Nexus5သည်ဗွီဒီယိုတစ်ခုတွင်ပေါ်လာသည်
Google I / O ပြီးသွားပါပြီ။ လက်ဗွေဖတ်တဲ့သူနဲ့ Nexus5ရဲ့ဗီဒီယိုမှာပါဝင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပြောစရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်။
[APK] ကြောက်မက်ဘွယ် !! HTC One M9 ၏အလွန်ကောင်းသောကင်မရာကို၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားလုံးနှင့်အတူဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည် HTC မှလွဲ၍ အခြား Android terminals မော်ဒယ်လ်များတွင်သင်ခံစားနိုင်စေရန် HTC One M9 ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအံ့ဖွယ်ကင်မရာကိုချန်ထားခဲ့သည်။
Android Wear သည် facelift ကိုရရှိသည်၊ သို့သော်ယခုအချိန်အထိ iOS အထောက်အပံ့မရသေးပါ
နောက်ဆုံးပေါ် Google I / O ထုတ်ဝေစဉ်အတွင်းတင်ပြခဲ့သော Android Wear 5.1 သတင်းအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ထံတင်ပြပါမည်
Nexus4နှင့် Nexus7၂၀၁၂ သည် Android M သို့မွမ်းမံနိုင်ခြင်းမရှိပါ
Android M သည်မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် operating system သစ်ကို update လုပ်လိမ့်မည်။ Nexus4နှင့် Nexus7version 2012 သည်ဤ update မပါပဲ
ထိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သူသည်၎င်း၏ HTC One M9 နှင့် One M9 + ကို Android M သို့ရရှိနိုင်ပါကအသစ်ပြောင်းမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
အသစ်စက်စက်တရုတ်စက်ပစ္စည်း။ OnePlus One သည် OnePlus Two ကိုမလာမီစျေးနှုန်းကျလိမ့်မည်။
Moto 360 ၏မျက်နှာကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း
ဒီနေ့ Moto 360 ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပုံရိပ်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပုံစံနှင့်ပုံစံကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ပြသပါမည်။
၎င်းသည် Lenovo စမတ်နာရီဖြစ်နိုင်သည်
စမတ်နာရီတွေကဖက်ရှင်ကျပြီးထုတ်လုပ်သူတွေကသူတို့လိုချင်ကြမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီကတော့နည်းသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ Lenovo စမတ်နာရီဖြစ်နိုင်တယ်။
Xiaomi Mi5ကိုယခုနှစ်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ရောက်ရှိမည်
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ Xiaomi Mi5၏ထင်ရှားသောထင်ရှားသည့်အချက်မှာ Autumn မှလာမည်ဖြစ်ပြီး Snapdragon 820 ပရိုဆက်ဆာတပ်ဆင်မည်။
ဒါက Samsung Galaxy J1 Pop ပါ
Samsung သည်ဈေးကွက်တွင်ရှိသည့်အကွာအဝေးအားလုံးကိုဖုံးကွယ်လိုသည်။ ယခုတွင်သင်သည်သင်၏လက်၌ low-end terminal တစ်ခုဖြစ်သည့် Galaxy J1 Pop ကိုပိုင်ဆိုင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
[APK] Wear Mini Launcher ကိုဗားရှင်း ၄.၀ သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးအရေးကြီးသောတိုးတက်မှုများပြုလုပ်ထားသည်
ဤနေရာတွင် apk နှင့် manual installation အတွက်တိုက်ရိုက် download ပြုလုပ်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အသစ်ဖြစ်သောအသစ်ဖြစ်သော Wear Mini Launcher ကိုသင့်အားဤနေရာတွင်ထားရှိပါသည်။
Xiaomi Mi Band သည် Google Fit နှင့်ထပ်တူပြုသည်
ယနေ့ခေတ်တွင် Xiaomi Mi Band လက်ကောက်သည်နေ့စဉ်ကာယလှုပ်ရှားမှုအတွက်အချက်အလက်အားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် Google Fit နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ထားသည်
OnePlus Two ကိုဇွန် ၁ ရက်တွင်တင်ပြနိုင်သည်
တရုတ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သော OnePlus Two ၏ terminal ကိုဇွန် ၁ ရက်တွင်တင်ပြနိုင်သည်။
၎င်းသည် Galaxy S6 Edge Iron Man Edition ဖြစ်သည်
ကျနော်တို့ကဒီကန့်သတ်ထုတ်ဝေမှုအကြောင်းအများကြီးပြောခဲ့ပေမယ့်ဒီနေ့အထိ Galaxy S6 Edge Iron Man Edition ၏တကယ့်ပုံသဏ္seeာန်ကိုကျွန်ုပ်တို့မမြင်နိုင်ပါ။
Google ကဒီနှစ်မှာ Nexus တက်ဘလက်ကိုထုတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး
တောင်ကြီးကြည့်ရှုသူများသည်ယခုနှစ်ကျန်သည့် Nexus တက်ဘလက်များကိုမထုတ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါ။ တက်ဘလက်ခေတ်ကုန်ပြီလား
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးသောအစစ်အမှန်ပုံရိပ်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအား Doogee F3 ဖြစ်လာမည့်တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏အထင်ကရအသစ်ဖြစ်သည်။
ဂျပန်ထုတ်လုပ်သူသည်စမတ်ဖုန်းများကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဘေးဘောင်များမပါ ၀ င်အောင်ပြုလုပ်နေပြီး၎င်းကို Sony Levander နှင့်လည်းပူးပေါင်းမည်ဖြစ်သည်။
OnePlus Two ကိုဇူလိုင် ၁၆ ရက်တွင်ဖြန့်ချိနိုင်သည်
လာမည့် OnePlus Two terminal သည်ဇူလိုင်လတွင်အထူးသဖြင့်ဇူလိုင် ၁၆ ရက်တွင်ထွက်ရှိနိုင်သည်။
Samsung Galaxy S6 နှင့် S6 Edge Iron Man Edition များတရားဝင်ဖြစ်သည်
Samsung ကနောက်ထပ်အသစ်ထုတ်မည့်စမတ်ဖုန်း ၂ ခုကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Galaxy S6 နှင့် S6 Edge Iron Man Edition ဖြစ်ပြီးလကုန်တွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ရေကြောင်းပို့ဆောင်စရိတ်အပါအ ၀ င် ၇၉ ယူရိုသာရှိသော HD ကင်မရာပါသော Drone တစ်ခုလုံး
သင်စျေးပေါသောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်စင်းကို ၀ ယ်လိုပါကဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော Quad Copter UltraFly သည်ပို့ကုန်ကုန်ကျစရိတ်အပါအ ၀ င်ယူရို ၇၉ ကိုသာယူဆောင်နိုင်သည်ဟုသင်မယုံကြည်နိုင်ပါ။
[APK] Samsung Galaxy S6 အပလီကေးရှင်းများကိုသင်၏ Samsung တွင်တပ်ဆင်ရန်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ဒီနေ့ Samsung Galaxy Terminal ၏အခြားမော်ဒယ်များတွင်ထည့်သွင်းရန် Samsung Galaxy S6 ၏အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့်မျှဝေသည်။
Flashtool ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ Xperia Z ကို Android 5.0.2 Lollipop သို့မွမ်းမံနည်း
Flashtool ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ Android 5.0.2 Lollipop ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုကို Xperia Z တစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်မည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်ကိုပြသပါမည်
အဘယ်ကြောင့် Galaxy Note5၏အစောပိုင်းထွက်ရှိမှု၏ကောလာဟလများသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိသနည်း။
Galaxy Note5ကိုစတင်ဖြန့်ချိရန်ခိုင်မာသည့်ကောလာဟလများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်၎င်းသည်ဘာကြောင့်မဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုရှင်းပြပြီးမည်သည့်အခါမျှထိုကဲ့သို့ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။
Samsung သည် Galaxy S10 နှင့် S6 Edge ၁၀ သန်းရောင်းချပြီးဖြစ်သည်
ကိုရီးယားမီဒီယာတစ်ခု၏အဆိုအရ Galaxy S6 နှင့် S6 Edge တို့၏ရောင်းအားသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ ရက်ပေါင်း ၄၀ အတွင်းအလုံးရေ ၁၀ သန်းရောင်းချခဲ့သည်။
Sony Xperia Z ကို Android 5.0 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
Android 5.0 Lollipop ကနောက်ကျပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့ Sony Xperia Z ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။
လာမည့် HTC One M10 သည်ယခုနှစ်မကုန်မီစျေးကွက်ထဲသို့ရောက်နိုင်သည်။
Galaxy S6 ကင်မရာရှပ်သံကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
သင်၏ ROOT ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ Galaxy S6 ကင်မရာ၏ရှပ်တာသံကိုမည်သို့ရပ်တန့်ရမည်ကိုပြသသည်
ယူရို ၂၀၀ ထက်မကသော Android ဖုန်း ၄ လုံး
လက်ကိုင်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံး ၀ ယ်ဖို့သင်စဉ်းစားနေပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ယူရို ၂၀၀ ထက်မနည်းတဲ့ဒီ Android ဖုန်းတွေကိုကြည့်ပါ။
စမတ်ဖုန်းအသစ်များ၏လမ်းကြောင်းသစ်မှာမျက်နှာပြင်တွင်ဘေးဘောင်များမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ Sony သည်၎င်းမိုဘိုင်းအမျိုးအစားကို Sony Lavender ဖြင့်လောင်းမည်။
Xiaomi Redmi Note2Pro သတ္တုကိုယ်ထည်ယိုစိမ့်မှုနှင့်အတူ
ထပ်မံ၍ Xiaomi Redmi Note2Pro သတ္တုကိုယ်ထည်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောဗားရှင်းရှိလိမ့်မည်ဟုယိုစိမ့်မှုကြောင့်ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။
တတိယမျိုးဆက် Moto G 2015 သည်ဘဝ၏လက္ခဏာများကိုပြသသည်
လာမယ့် Moto G 2015 ဟာနာမည်ကြီးအွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုမှာမကြာသေးမီကပေါ်ထွက်လာခြင်းကြောင့်မကြာမီရောက်လာတော့မှာပါ။
စမတ်နာရီဈေးကွက်သည် ၅ နှစ်အတွင်း ၇ ဆတိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သုံးစွဲသူ ၂၀ တွင်တစ်ယောက်သည်ဤစက်ပစ္စည်းတစ်ခုမှဝယ်ယူလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်း
ဒုတိယမျိုးဆက် Moto 360 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Moto 360 ကိုပထမဆုံးမျိုးဆက်ထုတ်လုပ်ပြီးကတည်းကကျွန်တော်တို့ဟာတစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ အခုသူ့ရဲ့ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်မယ့်အကြောင်းအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပါပြီ။
အမှားများပြင်ရန်အတွက် Galaxy S6 နှင့် S6 Edge ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
ကြယ်ပွင့် terminal အသစ်များဖြစ်သော Galaxy S6 နှင့် S6 Edge တို့သည်အမှားအယွင်းများကိုပြုပြင်ရန်အသစ်တစ်ခုကိုရရှိသည်။
Samsung ကသူ့ရဲ့ Galaxy S6 နဲ့ S6 Edge ကိုဂျပန်မှာရောင်းလို့မရဘူး၊ လိုဂိုကိုတောင်မဖယ်ထုတ်ဘူး
နောက်ဆုံးထုတ်အရောင်းအစီရင်ခံစာများအရဂျပန်နိုင်ငံရှိ Samsung Galaxy S6 နှင့် S6 Edge တို့၏ရောင်းအားသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမသွားနိုင်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
Sony က Xperia Z4 တက်ဘလက်အတွက် teaser ဗီဒီယိုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Xperia Z4 Tablet သည် Sony ၏မြင့်မားသောထုတ်ကုန်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ဒီတက်ဘလက်ဈေးကွက်အတွက်လောင်းကြေးအသစ်ဖြစ်သည်
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ၏နောက်ထပ်အထင်ကရ 820-nanometer Snapdragon 14 သည်ယခုအထိကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရသေးသောပရိုဆက်ဆာတစ်ခုထည့်သွင်းထားသည်။
touchscreen ပြOneနာများကိုဖြေရှင်းရန် OnePlus သည်၎င်း၏ OnePlus One ကို update လုပ်လိမ့်မည်
OnePlus Two ကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်တွင် OnePlus One တွင် touch screen ပြissuesနာများကိုကုမ္ပဏီကဖြေရှင်းပေးမည်ဟုကုမ္ပဏီကအတည်ပြုခဲ့သည်။
၂၀၁၅ Moto X သည် ၂၄၀ fps နှုန်းဖြင့်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်
နောက်မျိုးဆက်ဖြစ်သော Motorola စမတ်ဖုန်းများဖြစ်သော Moto X 2015 သည်နှေးကွေးနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် 240 fps ။
ZTE Q302C သည် Snapdragon 210 ပရိုဆက်ဆာကိုထည့်သွင်းထားသောပထမဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်။ ၅ ဒေါ်လာတန်တန်ဖိုးရှိသည့် LTE ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိသည်။
သင်၏ Android ကို HTC One M9 အဖြစ်မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုကျွန်ုပ်ပြသမည့်သင်ခန်းစာ။
နောက်ဆုံးပေါ် Android 5.0.2 update သည် Nexus9ကိုအားဖြည့်ပေးနေသည်
နောက်ဆုံးပေါ် Android 5.0.2 update ကိုအချို့သော Nexus9ကိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိသုံးစွဲသူများကမှတ်ချက်ချခဲ့သည်။
နောက်ထပ် Galaxy Note5မှအချက်အလက်များပိုမိုပေါက်ကြားလာသည်
Samsung ၏နောက်ထပ် phablet ဖြစ်သော Galaxy Note5သည်လက်ရှိဗားရှင်းများထက်သေးငယ်ပြီး Snapdragon 808 ပရိုဆက်ဆာပါရှိသည်။
Sony Xperia Z4 Compact ကိုမေလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်ထုတ်လုပ်မည်။
ကောလာဟလအသစ်များအရ Sony Xperia Z4 Compact ကိုမေလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကဂျပန်ဗားရှင်းလား?
OnePlus အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည် OnePlus Two ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်စျေးနှုန်းအချို့ကိုအတည်ပြုသည်
OnePlus ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကစျေးနှုန်းနှင့် OnePlus Two ၏နည်းပညာဆိုင်ရာထူးခြားချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ZTE Nubia Z9 သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ၅.၂ လက်မအရွယ် FHD မျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 5,2 နှင့် 810MP ကင်မရာတို့ဖြစ်သည်
မျက်နှာပြင် ၅.၂ လက်မရှိပြီး Snapdragon9နှင့် 5,2MP ကင်မရာတို့ပါ ၀ င်သည့် ZTE Nubia Z810 ၏တရားဝင်မှုသည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မမြင်နိုင်သော bezels များအတွက်ထင်ရှားသည်။
Sony က Xperia C4 ကို selfie ရိုက်ကူးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုကိုကြေငြာခဲ့သည်
Sony သည်ဂျပန်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သော terminal အသစ်တစ်ခုကိုယနေ့ကြေငြာခဲ့သည်။ ဒါက Xperia C4 ပါ။
လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်က HTC ရောင်းချမှုအတွက်အဆိုးဆုံးAprilပြီ
Android6ဖြင့် Galaxy S5.1.1 ကင်မရာကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်
နောက်ဆုံးပေါ် Android6Lollipop update ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Android Wear 5.1.1 ၏သတင်းအားလုံးကိုဗီဒီယိုတွင်ကြည့်ပါ
မကြာသေးမီကဂူဂဲလ်မှ ၀ တ်ဆင်နိုင်သော operating system အတွက် update အသစ်တစ်ခုရောက်ရှိခဲ့သည်။ အခုဆိုရင် Android Wear 5.1.1 သတင်းကိုဗီဒီယိုမှာတွေ့နိုင်ပါပြီ
ZTE Nubia Z9 ၏စျေးနှုန်းကိုလူသိများသည်
ZTE မှလာမည့်မေလ ၆ ရက်နေ့တွင် ZTE Nubia Z6 ၏စျေးနှုန်းကိုသိရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
Samsung စပိန်က Galaxy Note2ကို Android 5.0 ရရှိမည်ကိုအတည်ပြုသည်
Samsung Spain Note က Samsung Galaxy Note2ကို Android 5.0 L သို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စောစီးစွာအတည်ပြုလိုက်သည်။ ၎င်းသည်စျေးကွက်ထဲတွင်သုံးနှစ်ရှိခဲ့သည်ကိုစဉ်း စား၍ မရနိုင်ပါ။
ဇွန်အတွက် Samsung Galaxy S6 နှင့် S6 Edge Iron Man Edition အသစ်များ
Galaxy S6 Iron Man Edition နှင့် S6 Edge Iron Man Edition တို့သည်လူကြိုက်များသောစူပါဟီးရိုးကိုဂုဏ်ပြုသောဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီကိရိယာတွေကိုဇွန်လမှာရောက်မယ်
Galaxy Tab S2 အသစ်ကိုဇွန်လတွင်ကြေညာမည်
နောက်မျိုးဆက်ဖြစ်သော Galaxy Tab S2 ကိုလာမည့်လတွင်ကြေညာလိမ့်မည်။
Xiaomi Mi5 နှင့် Mi5 Plus ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ယိုစိမ့်မှုသည်နောက်တစ်ခုကတရုတ်ကုမ္မဏီ၏ Xiaomi Mi5 နှင့်၎င်း၏ Plus version ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်။
Samsung Galaxy Nexus ကိုသော့ဖွင့်နည်းနှင့် root လုပ်နည်း
သင်၏ Samsung Galaxy Nexus ကိုမည်သို့ root လုပ်မည်သို့မဟုတ်မည်သို့သော့ဖွင့်ရမည်ကိုသင်ရှာဖွေနေပါကယနေ့သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ယူဆောင်လာသည့်စုစည်းမှုရှိအကြံပြုချက်များအားလုံးကိုသတိပြုပါ။